निर्जीवन बीमाको चुक्तापूँजी : तीन कम्पनीको पुग्यो अन्यले मागे थप समय | गृहपृष्ठ
Home लगानी निर्जीवन बीमाको चुक्तापूँजी : तीन कम्पनीको पुग्यो अन्यले मागे थप समय
on: २४ भाद्र २०७५, आईतवार ११:१८ लगानी
निर्जीवन बीमाको चुक्तापूँजी : तीन कम्पनीको पुग्यो अन्यले मागे थप समय
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजीवृद्धिका लागि दिएको समयसीमा सकिएको छ । समितिले गत असार मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार पूँजीवृद्धिका विभिन्न योजना ल्याएका १५ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये तीनओटाले मात्र तोकेबमोजिमको पूँजी पुर्‍याएका छन् । निर्धारित चुक्तापूँजी पुर्‍याउने निजीवन बीमा कम्पनीहरूमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स छन् । शिखर इन्स्योरेन्सको रू. १ अर्ब ५ करोड ७३ लाख १० हजार, नेको इन्स्योरेन्सको रू. १ अर्ब १७ करोड ६२ लाख र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको रू. १ अर्ब २ करोड ७२ लाख पुगेको छ ।
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सले १ सय ६६ प्रतिशत हकप्रद जारी गरी पूँजी पुर्‍याएको हो । १ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत पूँजीवृद्धि गर्नेमा पनि यही कम्पनी रहेको छ । नेको इन्स्योरेन्सले बोनस तथा हकप्रद र शिखर इन्स्योरेन्सले बोनसमार्फत तोकिएको पूँजी पु¥याएका हुन् । पूँजीवृद्धिका लागि अधिकांश कम्पनीले हकप्रद र बोनसलाई नै माध्यम बनाएका छन् ।
हालसम्मको अवस्थामा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी सबैभन्दा कम देखिन्छ । कम्पनीले पारित गरेको प्रस्तावअनुसार १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको छ । हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि प्रक्रिया जारी रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतमले जानकारी दिए । सर्वसाधारणको मात्र स्वामित्व रहेको कम्पनीले ५१ प्रतिशत संस्थापक कायम गर्न बोनसपछि कायम चुक्तापूँजीको सर्वसाधारण सदस्यले खरीद गर्न पाउनेगरी १ बराबर १ दशमलव शून्य ५ को अनुपातमा हकप्रद ल्याउन लागेको हो । सर्वसाधारण र संस्थापक दुवैका लागि थप ३ सय प्रतिशत हकप्रदको प्रक्रिया अघि बढाइएको गौतमले बताए । पूँजीवृद्धिका लागि कम्पनीको ढिलाइभन्दा पनि प्रक्रियागत रूपमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा हाल २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नयाँ तीन कम्पनीले तोकिएको चुक्तापूँजी कायम गरी सञ्चालनको अनुमति पाएका हुन् । पुराना १७ कम्पनीमध्ये नेशनल र दी ओरियण्टल इन्स्योरेन्स विदेशी कम्पनी भएकाले यी कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापूँजीबराबरको निर्धारित पूँजी ‘एसाइण्ड क्यापिटल’ कायम गर्नुपर्नेछ ।
निर्धारित पूँजी कायम नभएसम्म विदेशी बीमा कम्पनीले कुनै पनि लाभांश घाषणा गर्न नपाउने प्रावधान बीमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा छ । यी दुवै कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालय भारतमा छन् । बीमा समितिको निर्देशनबमोजिम निर्धारित पूँजी कायम कायम गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा जानकारी गराइएको र हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको ओरियण्टल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एमके कपुरले बताए । बीमा समितिले भने यी दुवै कम्पनी भारतमा गाभिन लागेकाले सोपछि निर्धारित पूँजी कायम हुने जानकारी दिएको छ ।
तोकिएको अवधिमा पूँजी पुर्‍याउन नसकेपछि अधिकांश निर्जीवन कम्पनीले बीमा समितिसमक्ष अवधि थप्न माग गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार ३ महीना अवधि थप्न माग गर्दै सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, युनाइटेड इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले निवेदन दिएका हुन् ।
तोकिएको अवधिमा कार्ययोजनाअनुसार चुक्तापूँजी कायम गर्न नसक्ने भएमा कम्पनीहरूले कारण उल्लेख गरी म्याद थपको माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिले उक्त कारण मनासिव लागेमा बढीमा ३ महीनासम्मको म्याद थपिदिन सक्नेछ । समितिले ३ महिना अवधि दुईपटक थप्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । यस आधारमा पुराना बीमा कम्पनीका लागि पूँजी पु¥याउन थपिएको अवधि चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको हुनेछ । तोकेबमोजिम चुक्तापूँजी कायम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई समितिले सोही व्यवसाय गर्ने अन्य कम्पनीसँग गाभिन आदेश दिनसमेत सक्नेछ ।